2012 – Year – Burmese Subtitle
The Dictator (2012) The Dictator (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး ကြည့်ဖူးတဲ့သူကတော့ ဒီပုံလေးမြင်တာနဲ့ မှတ်မိမှာပါ။ အာဏာရှင် ကင်ဂျုံအီ၊ ကဒါဖီ တို့ကိုအခြေခံပြီး ဇာတ်ကောင်ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသရော်တဲ့ ဟာသကားပါ။ ဒီကားထဲက အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလာဒန် ဟာ နယူးယောက်ခ် ကုလအစည်းအဝေးကို လာတက်စဉ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပြီး သူ့နေရာကို ပုံစံတူလူစားထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သစ္စာဖောက်ဦးလေးဟာ နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့တဲ့ အလာဒန်တစ်ယောက် အခက်ခဲတွေကြားထဲကစွန့်စားပြီး သူ့နိုင်ငံကြီး ဒီမိုကရေစီမရဖို့အရေး သက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာရတဲ့အခါမှာတော့….. Review Credit
IMDB: 6.4/10 260,623 votes
Pitch Perfect (2012) Pitch Perfect ကားဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထြက္္ရိွခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ Mucical Comedy ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ Barden တကၠသိုလ္မွ Cappella သီဆိုၾကတဲ့ မိန္းကေလးမ်ားသာပါဝင္တဲ့ Bella အဖဲြ႔ဟာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ Cappella ၿပိဳင္ပဲြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္ အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Aubrey က စင္ေပၚမွာ အန္ခ်မိခဲ့တဲ့အတြက္ ပဲြပ်က္ၿပီး ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အဖဲြ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေက်ာင္းၿပီးသြား၍ အဖဲြ႕မွာ မပါဝင္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အဖဲြ႕ဝင္သစ္ေတြကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရပါေတာ့တယ္။ ေရွ႕က Bella ေတြရဲ႕ပံုစံကေတာ့ ေသးေသးသြယ္သြယ္၊ အရပ္ျမင့္ျမင့္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ဆဲြေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမွားေၾကာင့္ Bella အဖဲြ႔ နာမည္က်ဆင္းခဲ့ရေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားက ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံဖို႔စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေရွးက ပံုစံအတိုင္းအဖဲြ႔ဝင္ေတြကို မေရြးခ်ယ္နုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ အသံေကာင္းၿပီး သီခ်င္းဆိုတတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ အဖဲြ႔ဝင္သစ္ေတြျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ရင္းႏွီးမႈနည္းကာ နားလည္မေပးႏုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းဆိုရာတြင္ ...
Rurouni Kenshin: Origins (2012) ကဲဗျာဒီတစ်ခါတော့ IMDb Rating 7.6 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဂျပန် ဆာမူရိုင်းကားလေးဖြစ်ပြီး ဆာမူရိုင်းခေတ်ကနေ ခေတ်သစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ အခါမှာ ဘုရင့်တပ်မတော်မှာ အရင် ကတည်းက လိုအပ်ရင် စစ်မှုထမ်းလေ့ရှိတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေနဲ့ ခေတ်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံကြတဲ့ သူတွေအကြားမှာ တဖက်နဲ့ တဖက် ငဋိပက္ခဖြစ်ကြတာကို ရိုက်ကူးပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ဗျာ ဇာတ်လမ်းက အဟောင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ မဟုတ်တောင် ဒီတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးနဲ့ တော့ကြည့်ဖူးကြမယ့် ကားလေးမို့ သိပ်မညွှန်းတော့ပါဘူးနော် Review Credit to CM
IMDB: 7.5/10 18,482 votes
Cloud Atlas (2012) ဒီCloud Atlas မှာ အဓိကအားဖြင့် ဇာတ်ကောင် ၆ ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုု ရုုိက်ပြထားပြီး အဲ့ ဇာတ်ကောင် ၆ ယောက်ဟာ ၁၈၀၀ နှစ်များ၊ ၁၉၃၀၊ ၁၉၇၀၊ ၂၀၁၂၊ ၂၁၀၀၊ နောက်တော့ လူ့ယဉ်ကျေးမှုုပျက်ဆီးသွားတဲ့ ခေတ် စတဲ့ မတူညီတဲ့ ခေတ် ၆ ခေတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတဲ့ ပုုံကအရမ်းအံ့အော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားတည်းနဲ့ ဇာတ်ကား ၆ ကားကိုု တစ်ခါတည်းကြည့်ရသလိုု ပါပဲ။ အဲ့ဇာတ်ကား ၆ ကား ဟာလည်း တစ်ခုုနဲ့တစ်ခုု theme မတူညီတဲ့အတွက် အပေါ်မှာရေးထား သလိုု Adventure, Drama, Thriller, Scifi, Action, Mystery, Fantasy, Comedy ခံစားမှုုပေါင်းစုုံနဲ့ ရုုိက်ကူးထားပါ တယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုုံးအချက်ကတော့ ဒီလိုုမတူညီတဲ့ ခေတ် ၆ ခေတ်မှာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်ကောင် ၆ ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုု တစ်ပြိုင်တည်း တင်ဆက်ထားတာမှာ ဇာတ်လမ်းအတက်အကျတွေဟာ တစ်ပြေးညီဖြစ် နေတာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်း ...
IMDB: 7.4/10 333,751 votes
The Expendables2(2012) မင်းသားကြီး စတားလုံး၊ ဂျေဆန်စတေသန်၊ ဂျက်လီတို့အပြင် Die Hard မင်းသားကြီး ဘရုစ်ဝေလီ ပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး. IMDB 6.6 ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဘဲဖြစ်ပါတယ်... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း မစ်ရှင်တွေဆက်တိုက်အောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့ မင်းသားကြီးတို့အဖွဲ့ဟာ မစ်ရှင်တစ်ခုနောက်လိုက်ရင်းနဲ့.. ပြောရင်းနဲ့အရသာပျက်မစိုးလို့ ကွကိုယ်ဘဲကြည့်လိုက်ကြပါတော့...
IMDB: 6.6/10 283,388 votes
Maniac (2012) ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ Psyco ဝင်နေတတ်ကြတဲ့လူတွေ ရှိတတ်ကြသလို ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း Psycho ဝင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်... ဖရန့်ဟာ မိန်းကလေးချောချောလေးတွေကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်တတ်လေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်...။ သူ Psycho ဝင်တာက ကြောက်စရာအရမ်းကောင်းပြီး မိန်းကလေးချောချောလေးတွေကို သတ်တဲ့အထိပါပဲ 18+အခန်းလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့တော့ အကြံမပေးလိုပါဘူး ပြီးရင် ကြောက်စရာကောင်းပြီး ရက်စက်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ အခန်းတွေပါတဲ့အတွက်လည်း နှလုံးရောဂါရှိသူများ မကြည့်သင့်ပါဘူး။ သူက ဘယ်လို Psycho ဝင်လဲ မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်း‌တွေကို ဘာကြောင့်မက်မောသလဲ... ဘယ်လောက်အထိ သတ်ဖြတ်ရက်စက်တာလဲ၊ သူသဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ရင်ရော ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ...ခံစားကြည့်ကြပါဦး... Review Credit to CM
IMDB: 6.1/10 33,459 votes
Brave (2012) ဒီကားလေးမှာ ကောင်မလေးအမေက သူ့သမီးကို အရမ်း မိန်းကလေးပီပီသသနဲ့ ဖြစ်စေချင် သမီးဇြစ်သူက မြားကိုင်ပြီး လျှောက်သွားချင် နောက် သူ့သမီးကို ယောက်ျားပေးစားဖို့ ကြံတဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးလုပ်လိုက်တဲ့ တလွဲတွေကြောင့် သူ့အမေက ဝက်ဝံကြီး ဖြစ်သွားရော ဝက်ဝံကြီးဘဝနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျမဖြစ်သေးဘဲ လူစိတ် တစ်ဝက် ဝက်ဝံစိတ်တစ်ဝက် ဖြစ်နေတာတောင် သူ့သမီးကို အန္တရာယ်ပြုဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ နောက်ထပ် ဝက်ဝံ အကြီးကြီးတစ်ကောင်ကို ဖက်ပြီး ပြန်သတ်ဖို့ သတ္တိပေါ်လာတာ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးတွေ အပေါ် ကာကွယ်ပေးချင်တဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့်ပါပဲ။ Review Credit
IMDB: 7.1/10 351,776 votes
Flight (2012) Cast Away တို့ Forrest Gump တို့ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Director Robert Zemeckis ရဲ့ 2012 တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Flight ကတော့ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တယ်ဆိုပြီးညွှန်းရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ မင်းသားကြီး Denzel Washington အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ Drama , Thriller အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ Whip လို့ခေါ်တဲ့ အရက်အလွန်အကျွံစွဲလန်းနေတဲ့ လေယျာဉ်ပိုင်းလော့ဟာ တစ်ရက်သူတာဝန်ကျရာ လေယျာဉ်ကိုမောင်းနှင်ပျံသန်းနေတုန်းမှာပဲ လေယျာဉ်စက်ချို့ယွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ လေထဲမှာတင်စက်ချို့ယွင်းသွားမှုကြောင့် ခရီးသည်တွေကို အထိအခိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး မြေပြင်ကိုဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် လေယျာဉ်ပိုင်းလော့ Whip ကိုအများက Hero ကြီးသဖွယ်ဆက်ဆံလာရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရှိလာပါတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို Rating တွေမှာဆိုရင်လဲ Positive တွေရထားတာများပါတယ်။ IMDB မှာ 7.3/10 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ 78% တောင်ရရှိထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် Budget $31 million ...
IMDB: 7.3/10 307,505 votes
Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012) [Zawgyi] ဒီတစ္ခါေတာ့ 2005 ခုႏွစ္က ထြက္ခဲ့တဲ့ Madagascar ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ ကာတြန္းကားေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ Adventure comedy အမ်ိဳးအစား ကာတြန္းကားေလးပါ မာတီဆိုတဲ့ ျမင္းက်ားေလးရယ္အဲလက္စ္ဆိုတဲ့ ျခေသၤ့ရယ္ မယ္လ္မန္းဆိုတဲ့ သစ္ကုလားအုတ္ရယ္ ဂေလာ္ရီရာဆိုတဲ့ ေရျမင္းမေလးရယ္ သူတို႔ ၄ ေကာင္က အဓိက ဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားပါတယ္ သူတို႔ ေလးေကာင္ဟာ နယူးေယာ့ခ္တိရစၧာန္႐ုံက တိရစၧာန္ေလးေတြပါ တိရစၧာန္႐ုံထဲမွာပဲ သူတို႔ ဘဝကို ႏွစ္ျမႇုပ္ထားရင္း သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတဲ့ အခ်စ္ဆုံး သူငယ္ခ်င္း ၄ ေယာက္ေပါ့ တစ္ေန႔မွာ တိရစၧာန္႐ုံက ပင္ဂြင္း ၄ ေကာင္က အႏၲာတိကတိုက္ကို ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာကို ျမင္းက်ားေလးမာတီ ေတြ႕လိုက္ရာကငါတို႔လည္း အရိုင္းေတာထဲမွာ ေတာရိုင္းသတၱဝါေတြနဲ႔ သြားေနရင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမယ္လို႔ သူအေတြးရသြားပါေတာ့တယ္ သူ႔ေမြးေန႔မွာ က်န္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ၃ ေယာက္က ေမြးေန႔လုပ္ေပးၿပီး လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾကေပမဲ့ သူမေပ်ာ္ေတာ့ပါဘူး အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးမွ သူရွင္းျပလိုက္ေတာ့ အကုန္ အံ့ၾသၿပီး မျဖစ္နိုင္တဲ့အေၾကာင္း ...
IMDB: 6.8/10 151,078 votes
Ice Age: Continental Drift (2012) မသိဘူး တင်ဦးမယ် Ice Age4Continental Drift (ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေများ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားမှု့)တဲ့ ဟီး ဟုတ်လားမသိ * ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး ၇တိုက်ရယ်လို့ ကွဲသွားတာ ဘာကြောင့်လို့ထင်တုန်း???? ***ကဲကဲ ပြောပြမယ် Ellie တို့သားအမိနဲ့ Manny တို့ မိတ်ဆွေ ၃ ဦးက ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေရွေ့လျားမှု့ကြောင့် လူစုကွဲသွားပြီး Manny တို့က လူဆိုးတစ်သိုက်နဲ့ သွားတွေ့ fighting play... ကျန်တာဆက်ကြည့်ပါ ***ဒီတစ်ခါ ပါလာမှာက MLBB ရဲ့အချစ်တော် Sun အဲလေ မျောက်ကြီးcaptain gutt(မျောက်ဆိုပေမယ့် Ape နွယ်ဝင်)ပါ သူကဒီထဲမှာ ဗီလိန်ပါတဲ့ * Sun ကအချဉ်တော့မဟုတ် ဘူးနော် တပည့်တပန်းတွေကတော့များသား အဲ့ထဲကမှ ကျားမလေးShira က Diego နဲ့.......ဘာဖြစ်မလဲမသိ သိချင်ကွကိုယ်ကြည့် ***ကိုယ်သိတာတစ်ခုက နောက်ခံအသံပြောကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ captain gutt ရဲ့ နောက်ခံစကားပြောက GOT ကားထဲက ...
Talaash (2012) [Unicode] ၀ိညာဉ် ရှိတာ ယုံနိုင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးအမေးခံရဖူးလား မိတ်ဆွေ ???? သိပ္ပံပညာ ထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်မှာ ပရလောက ကိုလက်မခံလည်းမရဘူးဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးက ပြောပြနေမှာပါ။ IMDB 7.3/10 ရရှိထားတဲ့အတွက် အတော်အတန်အောင်မြင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးလို့ ဆိုနိုင်ပါသေးသည်။ (ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း) ညတစ်ညမှာပေါ့ ။ ရုပ်ရှင်မင်းသား အမန်ကပူးဟာ အက်စီးဒင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကလည်း လူခြေတိတ် နေပြီး လမ်းကလည်း အရှင်းသားဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ဟာ သမရိုးကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို အင်စပက်တာ Surjan ကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ Surjan ဟာ ထူးချွန်တဲ့ ရဲမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ လေးစားမှုက်ို အပြည့်အဝရရှိထားသူပါ။ ထို့နောက် အမန်ကပူးသေဆုံးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန် Surjan ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ရှရှီ ဆိုတဲ့ပြည့်တန်ဆာခေါင်း ဟာလည်း အမန်ကပူးသေဆုံးမှုကို ကြားရှိပြီးနောက် သူရဲ့အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးရှောင်ပြေးဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရှရှီမှာ ခြေတစ်ဖက်မသန်တဲ့ တပည့်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့နာမည်က တာမြူး။ ရှရှီဟာ သူရဲ့အသုံးအဆောင်တွေက်ိုထုပ်ပိုးရင်း နေရာရှောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ သုံးနေတဲ့ဆင်းကဒ်ကိုလည်း အသစ်ပြောင်းသုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ ထိုအချိန်မှာတော့ လွင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ဆင်းကဒ်ကို တာမြူးအသုံးပြုလေသော်အခါ ။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ။ ဘာတွေကွင်းဆက်ပေါ်လာမလဲ ဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ အင်စပက်တာ Surjan အကြောင်းထပ်ပြောရရင် သူဟာ မိသားစုရေးရာ စိတ်ထိခိုက်မှူ ရှိထားခဲ့သူပါ။ သူရဲ့သား ကရန်ဟာ ရေနစ်သွားခဲ့တာကြောင့် သူကိုယ်သူ့အပြစ်ရှိသလို မှတ်ယူထားသူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့သားဝိညာဉ် ရှိနေတာက်ိုတော့ မယုံသူတစ်ဦးပါ။ သူ့မိန်းမကတော့ သူ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုသူပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့သား ကရန် ၀ိညာဉ်နဲ့တွေ့ဆုံသည်ဟု သတင်းကြားမိလေသည်။ ထိုအခါမှာ သူ့သားဝိညာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်လိုသော Surjan မိန်းမ / အယုံအကြည်မရှိသော Surjan / သူတို့နှစ်ဦးကြား ပြဿနာတွေကလည်း Surjan အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများစေခဲ့ပါတယ်။ Surjan ဟာ အမန်ကပူးရဲ့ ...
IMDB: 7.3/10 36,371 votes
Thaandavam (2012) [Unicode] ကန်နီဆိုတဲ့Tamilလူမျိုးမျက်မမြင်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝဝမ်းရေးအတွက် ချာ့ချ်ကျောင်းတစ်ခုမှာ စန္ဒယားတီးရင်းနဲ့ အသက်မွေးနေရပါတယ်။ တစ်နေ့ ဆာရာဆိုတဲ့ Miss London နဲ့ ကန်နီတို့တွေ မတော်တဆတွေ့ဆုံသွားတဲ့အခါ ဆာရာက ကန်နီ့ကိ သနားချစ်ခင်သွားမိပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဆာရာတစ်ယောက် ကန်နီရဲ့ဘဝအမှန်ကိုသိရှိသွားတဲ့အခါမှာ … London အပါအဝင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် လူချမ်းသာအများစုဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ ဒီလူသတ်မှုတွေဟာ ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ဘာဖြစ်လို့အသတ်ခံရတာလဲ။ သတ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိသလဲ ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာလဲ။ ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် ဘယ်လိုတွေထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသလဲ အစရှိတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ရပ်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု အချိတ်အဆက်မိမိ ရိုက်ကူးပြသထားတဲ့ တမီလ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်နဲ့အညွှန်းကတော့ Aung Pyae Kyaw ဖြစ်ပါတယ် . [Zawgyi] ကန္နီဆိုတဲ့Tamilလူမ်ိဳးမ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ဘဝဝမ္းေရးအတြက္ ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းတစ္ခုမွာ စႏၵယားတီးရင္းနဲ႔ အသက္ေမြးေနရပါတယ္။ တစ္ေန႔ ဆာရာဆိုတဲ့ Miss London နဲ႔ ကန္နီတို႔ေတြ မေတာ္တဆေတြ႕ဆုံသြားတဲ့အခါ ဆာရာက ကန္နီ့ကိ ...
IMDB: 6.1/10 1,508 votes
Emperor (2012) Emperor ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းနာမည္ေလး အတိုင္း ဘုရင္ နဲ႔ သူ႔တိုင္းျပည္ အေၾကာင္းရိုက္ထားတဲ႔ ဇာတ္ကား ေလးတစ္ခုပါ။ ဘယ္နိုင္ငံ နဲ႔ ဘယ္ဘုရင္လဲ ဆိုေတာ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံပါ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ အၿပီး မွာ စစ္ရွံုး (လက္နက္ခ်) လိုက္တဲ႔ ဂ်ပန္ေတြ နဲ႔ စစ္နိုင္သူ အေမရိကန္ ေတြရဲ ႔ ၾကား က နိုင္ငံေရး အယူအဆ ေတြ ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ရဲ ႔ ဘုရင္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမွုေတြ ၊ ဘုရင္ရဲ ႔ သူ႔ တိုင္းသူျပည္သား ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္မွုေတြ ၊ ထိုေခတ္ က ဂ်ပန္စစ္တပ္ ရဲ ႔ ဝါဒျဖန္႔မွုေတြ နဲ႔ အတူ ဂ်ပန္ ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ႔ အေမရိကန္ စစ္သားတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း စသျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေတြကို ...
IMDB: 6.5/10 12,351 votes